Otu esi etinye MariaDB 10.6 na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye MariaDB 10.6 na AlmaLinux 8
November 4, 2021 September 25, 2021 by Jọshụa James
Mepụta & Wụnye ebe nchekwa MariaDB 10.6
Wụnye MariaDB 10.6
Chekwaa MariaDB 10.6 na edemede nchekwa
Banye na MariaDB 10.6 Ihe atụ
Wepu MariaDB 10.6
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye MariaDB 10.6 na AlmaLinux 8.
Ndabara MariaDB jikọtara ya na AlmaLinux AppStream ebe nchekwa na-enye MariaDB 10.3, nke dị ugbu a nke ọma ụbọchị. Iji wụnye ụdị ọhụrụ, ọtụtụ ga-ele anya na MariaDB 10.5 yana ntọhapụ kwụsiri ike kacha nso nso a MariaDB 10.6. Enwere ike itinye nke ọ bụla site na ịgbakwunye onye ọrụ MariaDB ebe nchekwa.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ oge ọzọ MariaDB 10.5, wee jiri nke ọzọ kama MariaDB 10.6:
Chekwaa faịlụ (CTRL+O) wee pụọ (CLTRL+X).
Iji mechaa wụnye ebe nchekwa ọhụrụ, ịkwesịrị imelite ebe nchekwa sistemụ gị maka AlmaLinux imekọrịta ebe nchekwa agbakwunyere ọhụrụ. Jiri iwu a ka imelite dịka ndị a:
Mara, n'oge echichi, a ga-akpali gị bubata igodo GPG maka MariaDB 10.6.
Ị kwesịrị ị nweta (okwa ok) ịmara na ihe niile na-arụ ọrụ.
Mbụ, jiri iwu na-esonụ iji malite (mariadb_secure_installation):
Na-esote, soro n'okpuru:
Mara, ị na-eji (NA) iji wepụ ihe niile.
Ugbu a ị dechara edemede nche nrụnye biputere, banye n'ime gị MariaDB Enwere ike ime nchekwa data site na iji ihe ndị a:
A ga-akpali gị itinye mgbọrọgwụ okwuntughe nke ị debere na nhazi nrụnye ma ọ bụ edemede nche nrụnye biputere. Ozugbo n'ime ihe atụ ọrụ MySQL, ị nwere ike ịme iwu ndị a dị ka ule iji hụ na ọ na-arụ ọrụ.
Pịnye ihe ndị a GOSI DATABASE iwu:
Maka ndị ọhụrụ na MySQL, syntax iwu niile ga-ejedebe na ";".
Iji pụọ na njedebe, pịnye ihe ndị a iwu ọpụpụ:
Ọ bụrụ na ịchọghị iji MariaDB ma chọọ iwepụ ya n'uju, mebie iwu a:
Rịba ama na iwu a ga-ewepụ ọtụtụ n'ime ihe ndabere na-ejighị ya na nrụnye MariaDB iji nyere aka hichaa usoro gị.
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye MariaDB kachasị ọhụrụ na ntọhapụ kwụsiri ike kachasị ọhụrụ AlmaLinux 8. N'ozuzu, ọ ga-enyere aka ma ọ bụrụ na ị kwalite site na ochie anụ ụlọ 10.5 dị ka ọ mara mma ugbu a tụnyere 10.6, na e nwere nnukwu uru. na arụmọrụ na nkwalite. Ọ bụrụ na ị na-eme nkwalite, jide n'aka na ị na-akwado nchekwa data gị mgbe niile tupu ime ya iji zere ọtụtụ awa mgbu na nkụda mmụọ.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux, MariaDB Mail igodo
Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na AlmaLinux 8
Otu esi etinye Node.JS 14 LTS/16 & NPM na Debian 11 Bullseye